Momba anay - Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd.
Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana valves fanararaotana mandritra ny 25 taona mahery, hita ao amin'ny faritanin'i Hebei, ny valizy dia mety amin'ny kamio mavesatra, fambolena, indostria, motera an-dranomasina, andiana mpamorona, fiara fitaterana, motera gazy ary moto.
Ny fahafaham-pamokarana isan-taona dia mihoatra ny 8 tapitrisa pcs valves isan-karazany. Ny orinasa Huacheng dia voamarina amin'ny ISO / TS16949 tamin'ny 2008. Ny maodelin'ny valizy misy antsika dia misy ny maodelin'ny amerikana, japoney, alemanina ary karazana karazana maotera eto an-toerana, be mpampiasa amin'ny motera Diesel, traktera, excavator sns. fonosana, voafehy tanteraka ny fizotrany rehetra.
Manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina izahay, fanatsarana ny teknolojia mitohy ary fanavaozana ny fitaovana tato anatin'ny taona vitsivitsy, toy ny: lafaoro mitohy ho an'ny fitsaboana hafanana, ny famonoana karazana U amin'ny valizy kely, ny fantsom-boaloboka Steli amin'ny seza valizy, hiantohana ny vokatra tsy miovaova sy ny fahamendrehan'ny valin'ny valva ary mahazo fankatoavana betsaka avy amin'ny mpanjifa sy ny tsena. afaka manao vokatra vaovao mifototra amin'ny sary valizy na santionany avy amin'ny mpanjifa isika.
Fitaovana fisotroana valizy manokana, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo, 21-4N, 23-8N, X60, X80, Inconel751,21-4NWNb.
Tsipika fanodinana fifandraisana amin'ny CNC, lafaoro mitohy ho an'ny fitsaboana hafanana, fikolokoloana, fikolokoloana Steli, famonoana U, fametahana chrome, nitriding malefaka
12 volana na 300000km
Mamolavola sy mamolavola vokatra vaovao miorina amin'ny santionany na sary.
Tsy misy fepetra takiana amin'ny stock.
Miatrika ny tsena foana isika miaraka amin'ny "mifototra amin'ny mpanjifa", manantitrantitra ny tanjon'ny kalitao "Ny vokatra tsy lavorary, ny fitarainan'ny mpanjifa aotra", manolotra ny vidinay sy ny serivisy ifaninanana. Izahay dia mpamatsy OEM ho an'ny Fiara Fiara Ara-barotra Geely ary nanondrana ny valva ho any Etazonia, Alemana, Frantsa, Polonina, Pakistan ary Indonezia.
Miarahaba anao am-pitiavana ireo namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary manantena ny hiara-miasa aminao, tianay ny hanome anao ny valves sy serivisinay ambony.